कोरोना भाइरस भेदभाव बारे कहाँ परामर्श लिने | COVID-19 多言語情報ポータル
कोरोना भाइरस भेदभाव बारे कहाँ परामर्श लिने
तपाईंले नयाँ कोरोना भाइरस (COVID-19) सँग सम्बन्धित भेदभाव अभियोग सामना गर्नुभएको वा देख्नुभएको छ? त्यहाँ परामर्श डेस्कहरू छन्। एक्लै परिश्रम नगर्नुहोस् र कृपया उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
भेदभाव कुनै पनि अभियोगको लागि स्वीकार गरिएको हुनुहुँदैन। कृपया तपाईंले सही जानकारी प्राप्त गर्नुभयो र राम्रो प्रक्रिया लिनुभयो भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
हामी अहिले केही समयको लागि COVID-19 महामारी विरुद्ध लडाई गरिरहेका छौं। यस समय अवधिमा, तपाईं वा तपाईंलाई थाहा भएको कोही व्यक्तिलाई भेदभावपूर्ण प्रक्रियाबाट समस्या भएको छ? उदाहरणहरू निम्न छन्:
तपाईंले अस्पताल वा नर्सरी घरमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईंले अरूलाई भाइरस फैलाउनुहोस् वा मानिसले कामपछि तपाईंलाई कठोर शब्दहरू भन्नुहोस् भन्नी चाहनुहुन्न भनी तपाईंले भनेको कुराबाट मानिसले जानीजानी टाढा राखेका छन्।
तपाईंले सुपरमार्केट, सुविधाजनक स्टोर वा लागूपदार्थ स्टोरमा काम गर्नुहुन्छ। ग्राहकहरूले नोभेल कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित कठोर शब्दहरू भन्छन्।
तपाईंले वस्तुहरूको विभाजन वा आधारभूत संरचना उद्योगको लागि काम गर्नुहुन्छ। मानिसले तपाईं आफ्नो कामको बाटोमा हुँदा तपाईंलाई आक्रामक रूपमा घरमा बस्न भन्छन् वा तिनीहरूले तपाईंलाई अनलाइनमा अनुचित प्रतिक्रियाहरू छोड्छन्।
तपाईं वा तपाईंको परिवारको सदस्य नोभेल कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुनुभएको छ। मानिसले हल्लाहरू फैलाउने, तपाईंबाट टाढा रहने वा यस बारे तपाईंमा कठोर शब्दहरू भन्ने गर्छन्। यस बाहेक, कोहीले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रकट गरेको वा तपाईं बारे अनलाइनमा हानिकारक प्रतिक्रियाहरू छोडेको तपाईंले देख्नु भएको छ।
तपाईं विदेशी नागरीक भएका कारणले मात्र, मानिसले तपाईं कोरोना भाइरसको संक्रमित हो भनी कल्पना गर्छन् वा “xx (तपाईं कहाँबाट हो) – भाइरस” भनी भाइरस बोलाउछन्।
दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा, माथी उल्लिखित गरिएको अवस्थाहरू पहिलो नै स्थायी गरिएको थियो। निश्चित रूपमा अस्वीकरणीय हुने नाटकहरू निश्चय भेदभाव हुन्।
हाम्रो लागि प्रत्येक दिन उहाँहरूको जीवन जोखिममा राखे विरूद्ध कोहिले पनि भेदभाव गर्न सक्दैन: स्वास्थ्यस्याहार कर्मचारीहरूले चिकित्सा जाँचहरू र उपचारहरू गर्ने, स्टोर लिपिकहरूले बेच्ने खाना र दैनिक आपूर्तिहरू र लोजिस्टिक्स र आधारभूत संरचना उद्योगमा कर्मचारीहरू—तिनीहरूले हाम्रो सामाजिक कार्य बनाउछन्।
यसबाट संक्रमित भएका, तिनीहरूका परिवारहरू र तिनीहरू कहाँबाट हुन् भनी होइन, हामीले नोभेल कोरोनाभाइरस आफैलाई मात्र आरोप लगाउन सक्छै भन्नी हामीले ध्यानमा राख्न आवश्यक छ। कोही बिरामी भयो भने, उहाँहरूलाई मात्र अनुकूल रूपमा भन्नुहोस् कि तपाईंको हृदय उहाँहरूसँग छ।
त्यस्ता शब्दावलीले भेदभाव कार्य र पक्षपातको जोखिमलाई उत्तेजित बनाउन सक्ने भएकाले, WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) दृढतापूर्वक प्रकोप सुरु भएको राष्ट्र वा क्षेत्रलाई पछि भाइरस नाम भन्ने कुराको विरूद्धमा छ।
तपाईं कहिले भेदभाव नाटकहरू वा अपवाद पीडित हुनुभयो भने, व्यावसायिकहरू तपाईंको काहानीला‌ई सहायता डेक्सहरूमा सुन्नको लागि छन्। तपाईंले कोही व्यक्तिलाई भेदभाव सामना गरिरहेको देख्दाँ तपाईंले पनि सुझावको लागि कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया तल सूचीबद्ध गरिएका सहायता डेक्सहरू बारे जानकारी साझा गर्नुहोस्।
न्याय मन्त्रालयबाट सहायता डेक्स सेट गरियो
न्याय मन्त्रालयले तपाईंले भेदभाव सामना गर्दा सुझावको लागि तपाईंले सामान्य रूपमा कुराकानी गर्न सक्ने वा सोध्न सक्ने परामर्श र परामर्श सेवाहरू प्रवर्तन गर्छ।
तपाईंले उहाँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंलाई भित्र राखिरहेको अवस्था मध्यस्थ गर्नको लागि
तपाईंलाई तपाईंको मानव अधिकारहरू उल्लङ्घन गर्ने लाई सुधार अनुरोध पेश गर्न मद्दत गर्नको लागि
आवश्यक भएमा तपाईंलाई व्यावसायिक वकील र सम्बन्धित संस्थाहरूमा पठाउनको लागि
थप जानकारीको लागि, कृपया यो पुस्तिका मा जाँच गर्नुहोस्।
विदेशी भाषा मानव अधिकारहरूका हटलाइन
त्यहाँ गैर-जापानी-स्पिकरहरूको लागि टेलिफोन परामर्श सेवाहरू छन्। तपाईंले जापानमा जहाँबाट पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ र यो हटलाइनले तपाईंलाई तपाईं नजिकको कानूनी कारोबार ब्युरोमा जडान गर्नेछ। तपाईंले यस पुस्तिकामा पनि जानकारी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
सञ्चालन समय: 9:00〜17:00, हप्ता दिन
सहायता गरिएका भाषाहरू: अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिश, पोर्चुगाली, भियतनामी, टागालग, नेपाली र थाइ
※लागु फोन शुल्कहरू।
※यो कल गर्ने तिन तरिकाको सेवा हो जसले तपाईंलाई जडान गर्छ र तपाईंको कुराकानी अनुवाद गर्छ।
मानव अधिकारहरूका अनलाइन परामर्श सेवा
मानव अधिकार परामर्श अङ्ग्रेजी र चिनियाँमा उपलब्ध छन्। तल भएको लिङ्कबाट अनुरोध फाराम पेश गर्नुहोस् र उहाँहरूले तपाईंलाई इमेल वा फोन कल मार्फत जवाफ दिनुहुनेछ। तपाईंले जापानमा तिनीहरूलाई जहाँबाट पनि सन्देश दिन सक्नुहुन्छ।
मानव अधिकारहरूका अनलाइन परामर्श सेवा:अङ्ग्रेजी फाराम
मानव अधिकारहरूका अनलाइन परामर्श सेवा:चिनियाँ फाराम
अन्य परामर्श डेक्सहरू
विदेशी नागरिकहरूका लागि कानूनी जानकारी (जापान कानूनी सहायता केन्द्रद्वारा सञ्चालित गरिएको)
तपाईंले श्रम अवस्थाहरूसँग सम्बन्धित भेदभाव समस्याहरू वा COVID-19 महामारीको कारण भिसा कार्यपद्धतिहरू सामना गर्नुभएको छ?
होउ-टेरासु (जापान कानूनी सहायता केन्द्र) ले जापानी कानूनी प्रणालीबारे जानकारी उपलब्ध गराउँछ र तपाईंलाई मानव अधिकारका समस्याहरूमा भएको विशेष खालको बार संस्थाहरूमा पठाउछ। यो वेबसाइटमा थप जानकारी पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईं क्वारेन्टाइनको समयमा घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनुभएको छ? घरेलू हिंसाले तपाईंलाई शारीरिक, यौन वा मनोवैज्ञानिक हानी गर्ने, अभिभावकलाई उहाँहरूले नचाहने तरिकाको व्यवहार गर्न दबाव दिने जस्तो व्यवहारहरू समावेश गर्छ। तपाईं यी मध्य कुनै बाट जानुभएको छ भने, कृपया यो लेखमा एकपटक हेर्नुहोस् र सुझावको लागि परामर्श डेस्कमा सोध्नुहोस्।
नोभेल कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित कुनै भेदभावपूर्ण प्रक्रियाहरू (हानिकारक हल्लाहरू सहित) रोक्नको लागि, भाइरस र यसको लक्षणहरू बारे सही जानकारी अार्जन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले अनलाइन वा अफलाइन नक्कली समाचारहरू सामना गर्न सक्नुहुन्छ; तपाईंले आफ्नो नजिकको साथीहरूबाट अनियमित हल्लाहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। कृपया सही जानकारीको लागि हाम्रो अन्य लेखाहरू जाँच गर्नुहोस्।
COVID-19 को बारेमा बहुभाषीय वेबसाइटहरू
यो अनुच्छेदले COVID-19 सँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बहुभाषीय वेबसाइटहरूको परिचय दिन्छ। आधिकारिक पृष्ठहरू ...
हिट स्ट्रोक (लू लाग्ने) बाट सावधान रहनुहोस्
हामीले COVID-19 को संक्रमण विरूद्ध सावधानीहरू अपनाएको समयमा, यो ग्रीष्म ऋतुको समयमा हामी लू लाग्नेबाट सावधान रहौं। ह...